I-Crazy lace agate, evame ukutholakala eMexico - Ividiyo
I-agate yelensi ehlanyayo
Amathegi Agate, Intambo ehlanyayo
Thenga i-agate yemvelo enobuhle yemvelo esitolo sethu
I-Crazy lace agate, evame ukutholakala eMexico, imvamisa enemibala egqamile nephethini eyinkimbinkimbi, ekhombisa ukusatshalaliswa kwemigqa ye-contour kanye namaconsi ayindilinga, asakazeke edwaleni. Itshe ngokujwayelekile linombala obomvu nomhlophe kodwa liphinde libonakale libonisa inhlanganisela ephuzi nelimpunga futhi.
I-Agate ukwakhiwa kwamadwala ajwayelekile, aqukethe i-chalcedony ne-quartz njengezakhi zawo eziyinhloko, ezinemibala ehlukahlukene ehlukahlukene. Ama-agates akhiwa ngokuyinhloko phakathi kwamadwala wentaba-mlilo kanye ne-metamorphic. Ukusetshenziswa kokuhlobisa kwama-agates kubuye kufike eGrisi yasendulo futhi kusetshenziswa kakhulu njengokuhlobisa noma ubucwebe.
Amaminerali we-Agate anomkhuba wokubumba noma ngaphakathi kwamadwala angaphambi kokuba khona, adala ubunzima ekunqumeni ngokunembile isikhathi sawo sokubumba. Amatshe abo abanjelwe kuye kuthiwe abumba ekuqaleni kwe-Archean Eon. Ama-agates atholakala kakhulu njengezindindana ngaphakathi kwemikhawulo yamadwala wentaba-mlilo. Lezi zingqimba zakhiwa kusuka kumagesi abhajwe ngaphakathi kwensimbi eyenziwe ngentaba-mlilo eyenziwe ngokwakhiwa. Amakhethini agcwala uketshezi olunobisi lwe-silica oluvela ezintweni ezibonakalayo zentaba-mlilo, izingqimba zifakwa odongeni lwethambeka lisebenza kancane kancane liye ngaphakathi. Isendlalelo sokuqala esifakwe ezindongeni ze-cavity saziwa kakhulu ngokuthi ungqimba lwe-priming. Ukwehluka kubalingisi besixazululo noma ezimeni zokubekwa kungadala ukuguquguquka okuhambisanayo kuzendlalelo ezilandelanayo. Lokhu kuhluka kuzendlalelo kuholela kumabhendi e-chalcedony, evame ukuhlangana ngezendlalelo ze-quartz crystalline quartz ezakha i-agate banded. Ama-agate angenalutho angakha futhi ngenxa yokufakwa kwe-silica egcwele uketshezi engangeni ngokujulile ngokwanele ukugcwalisa i-cavity ngokuphelele. I-Agate izokwakha amakristalu ngaphakathi komgodi oncishisiwe, i-apex yekristalu ngalinye lingakhomba enkabeni ye-patity.
Crazy lace agate okushiwo
I-Crazy lace agate ibizwa ngokuthi itshe lokuhleka, noma ulayini othokozayo. Ihlotshaniswa nama-fiestas aseMelika anelanga nomdanso, futhi kuletha injabulo kulabo abaligqokayo. Akusilo itshe lokuvikela, kepha ukwesekwa nokukhuthaza, ukuphakamisa imicabango nokukhuthaza ithemba. Idizayini yayo enhle, ngamaphethini we-lacy okungahleliwe, idala ukugeleza kwamandla okujikelezayo, kuvuselela ingqondo nesimo sengqondo.
I-agate yelensi e-Crazy, evela eMexico
I-agate yeso ophuzi
Amathegi Agate, Iso eliphuzi
Amathegi Agate, chalcedony, Amagilebhisi
Amathegi Agate, geode
Amathegi Agate, moss
Ukuhanjiswa kwamahhala kwamahhala kwanoma iyiphi i-oda lokungenani lama- $ 50.00 esitolo sethu